Miley Cyrus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အနမျးပိုငျရှငျ ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Miley Cyrus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အနမျးပိုငျရှငျ ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ?
Mandatory Credit: Photo by Rob Latour/REX/Shutterstock (10122482au) Miley Cyrus The Women's Cancer Research Fund hosts An Unforgettable Evening, Arrivals, Beverly Wilshire Hotel, Los Angeles, USA - 28 Feb 2019 Wearing Tom Ford Same Outfit as catwalk model *9865768bh
Miley Cyrus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အနမျးပိုငျရှငျ ဘယျသူဖွဈမလဲ ? ? ?
admin June 18, 2019	Entertainment Leaveacomment
Liam Hemsworth နဲ့ လကျထပျထိမျးမွားထားတဲ့ အသကျ ၂၆နှဈအရှယျ Miley Cyrusက သူမရဲ့ပထဦးဆုံးအနမျးပိုငျရှငျဟာ အလယျတနျးကြောငျးတုနျးက မိနျးကလေးသူငယျခငျြးတဈယောကျဖွဈကွောငျး What’s the Tea with Michelle Visage အစီအစဉျက အငျတာဗြူးမှာ ဖှငျ့ဟဝနျခံခဲ့ပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကိုကွားရတဲ့အခြိနျမှာ လူတှကေ နားလညျရခကျသှားပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူမက ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျတဈယောကျနဲ့ လကျထပျထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ “LGBTအဖှဲ့အစညျးထဲမှာ ပါဝငျတဲ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာစိတျဝငျစားမှုကို ဖျောပွတာထကျ သူ့တို့ရဲ့ပငျကိုယျဖွဈတညျမှုကို လေးစားအသိအမှတျပွုကွတာမြိုးပါ။ ဒါက ကိုယျခဈြတဲ့လူကိုခဈြတာမြိုးမဟုတျဘဲ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ခဈြတာ၊ လေးစားတာမြိုး ဖွဈတယျ။ ကြှနျမက လိငျတူခဈြကွိုကျတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး အမွဲတမျးထောကျခံအားပေးတယျ” လို့လညျး သူမကပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျက ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ RuPaul ရဲ့ Drug Race အစီအစဉျမှာ ဒိုငျအဖွဈ ပါဝငျဆောငျရှကျပေးခဲ့တဲ့ Miley Cyrusက “ကြှနျမက ဘာသာတရားကိုငျးရှိုငျးတဲ့ မိသားစုကနကွေီးပွငျးလာတာပါ။ ကြှနျမရဲ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာစိတျဝငျစားမှုကို ၆တနျးအရှယျလောကျကတညျးက သိရှိသတိထားမိလာတာပေါ့။ ထိုစဉျကတော့ ကြှနျမရဲ့မိဘတှကေလညျး ဒီအရာကို နားမလညျပေးနိုငျခဲ့ဘူး။ ကြှနျမဘဝတဈလြှောကျလုံး ကြှနျမ “လိငျတူလိငျကှဲနှဈမြိုးလုံးကို စိတျဝငျစားတဲ့ နှဈဖကျခြှနျ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရမျးမုနျးတာ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ လူတဈယောကျကို မိနျးကလေးဖွဈနမှေ ယောကျြားလေးဖွဈနမှေ ခဈြရမယျလို့ ဘောငျခတျထားလိုကျသလိုပဲ။ ဆနျကငျြဘကျလိငျနဲ့ လကျထပျထိမျးမွားတာဟာ သဘာဝကတြယျဆိုတဲ့ လူတှရေဲ့ လကျထပျထိမျးမွားကွတဲ့ အကွောငျးအရငျးက ခတျေနောကျကကြနျြခဲ့ပွီ။ ကြှနျမလို လိငျတူခဈြကွိုကျတတျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျက ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျနဲ့ လကျထပျတာကိုပဲကွညျ့ပါလား။ ဒါဟာခတျေသဈပါ။ အရာအားလုံးပွောငျးလဲကုနျပွီ။ ကြှနျမတို့ လူတဈယောကျကို ခဈြကွိုကျနှဈသကျတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလူရဲ့ လိငျကှဲပွားမှုတှေ၊ သူ့ရဲ့ပုံပနျးသဏ်ဍနျတှနေဲ့ ဘာမှမသကျဆိုငျပါဘူး။ သူရဲ့ စိတျဝိညာဉျကို ခဈြတာမြိုးပါ။ ဒီဘကျ မြိုးဆကျသဈလူငယျတှရေဲ့ ခဈြကွိုကျပွီးရညျးစားဖွဈတာနဲ့ လကျထပျထိမျးမွားပွီး အိမျထောငျဖကျဖွဈလာတာတှမှော ယောကျြားမိနျးမကှဲပွားတာတို့၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာစိတျဝငျစားမှုတို့က အနညျးအကဉျြးပဲ ဆကျနှယျနတောပါ။ မင်ျဂလာဆောငျမှာ မင်ျဂလာဝတျစုံဝတျတာတို့၊ ကြှနျမရဲ့ဆံပငျကိုဖွောငျ့လိုကျတာတို့က ကြှနျမကို ကွညျ့နသေူတှရေဲ့အမွငျမှာ အမွငျသငျ့တျောနစေဖေို့အတှကျမဟုတျဘူး။ ကြှနျမ စိတျထဲပျေါလာတာကို ကြှနျမဖွဈခငျြတာကို လုပျလိုကျတာမြိုးပါ။” လို့ ပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။
ထပျပွီးတော့ Miley Cyrus က “ကြှနျမနဲ့ Liam ရဲ့ ခဈြသံယောဇဉျလေးဟာ ကြှနျမအတှကျ အရမျးကို အဖိုးတနျလှနျးပါတယျ။ ကြှနျမသူ့နဲ့ အတူတူရှိနရေရငျပဲ ကြှနျမ နရောမှနျ၊ လမျးမှနျမှာရှိနတေယျလို့ ခံစားနရေတယျ။ သူ့ရဲ့ရငျခှငျက ကြှနျမအတှကျ နှေးထှေးတဲ့အိမျကလေးလိုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမ Liam နဲ့ လကျထပျထိမျးမွားလိုကျတာက ကြှနျမရဲ့ပငျကိုယျဖွဈတညျမှုကို မပြောကျကှယျသှားစနေိုငျပါဘူး” လို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။
Miley Cyrus ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အနမ်းပိုင်ရှင် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? ? ?
Liam Hemsworth နဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားထားတဲ့ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် Miley Cyrusက သူမရဲ့ပထဦးဆုံးအနမ်းပိုင်ရှင်ဟာ အလယ်တန်းကျောင်းတုန်းက မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း What’s the Tea with Michelle Visage အစီအစဉ်က အင်တာဗျူးမှာ ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာ လူတွေက နားလည်ရခက်သွားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူမက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ “LGBTအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကို ဖော်ပြတာထက် သူ့တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကို လေးစားအသိအမှတ်ပြုကြတာမျိုးပါ။ ဒါက ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တာ၊ လေးစားတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မက လိင်တူချစ်ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အမြဲတမ်းထောက်ခံအားပေးတယ်” လို့လည်း သူမကပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ RuPaul ရဲ့ Drug Race အစီအစဉ်မှာ ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ Miley Cyrusက “ကျွန်မက ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာတာပါ။ ကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုကို ၆တန်းအရွယ်လောက်ကတည်းက သိရှိသတိထားမိလာတာပေါ့။ ထိုစဉ်ကတော့ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကလည်း ဒီအရာကို နားမလည်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကျွန်မ “လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးလုံးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ နှစ်ဖက်ချွန်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အရမ်းမုန်းတာ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ကို မိန်းကလေးဖြစ်နေမှ ယောက်ျားလေးဖြစ်နေမှ ချစ်ရမယ်လို့ ဘောင်ခတ်ထားလိုက်သလိုပဲ။ ဆန်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားတာဟာ သဘာဝကျတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်မလို လိင်တူချစ်ကြိုက်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ လက်ထပ်တာကိုပဲကြည့်ပါလား။ ဒါဟာခေတ်သစ်ပါ။ အရာအားလုံးပြောင်းလဲကုန်ပြီ။ ကျွန်မတို့ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီလူရဲ့ လိင်ကွဲပြားမှုတွေ၊ သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍန်တွေနဲ့ ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ သူရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ချစ်တာမျိုးပါ။ ဒီဘက် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီးရည်းစားဖြစ်တာနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်လာတာတွေမှာ ယောက်ျားမိန်းမကွဲပြားတာတို့၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုတို့က အနည်းအကျဉ်းပဲ ဆက်နွယ်နေတာပါ။ မင်္ဂလာဆောင်မှာ မင်္ဂလာဝတ်စုံဝတ်တာတို့၊ ကျွန်မရဲ့ဆံပင်ကိုဖြောင့်လိုက်တာတို့က ကျွန်မကို ကြည့်နေသူတွေရဲ့အမြင်မှာ အမြင်သင့်တော်နေစေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ စိတ်ထဲပေါ်လာတာကို ကျွန်မဖြစ်ချင်တာကို လုပ်လိုက်တာမျိုးပါ။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။
ထပ်ပြီးတော့ Miley Cyrus က “ကျွန်မနဲ့ Liam ရဲ့ ချစ်သံယောဇဉ်လေးဟာ ကျွန်မအတွက် အရမ်းကို အဖိုးတန်လွန်းပါတယ်။ ကျွန်မသူ့နဲ့ အတူတူရှိနေရရင်ပဲ ကျွန်မ နေရာမှန်၊ လမ်းမှန်မှာရှိနေတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။ သူ့ရဲ့ရင်ခွင်က ကျွန်မအတွက် နွေးထွေးတဲ့အိမ်ကလေးလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ Liam နဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားလိုက်တာက ကျွန်မရဲ့ပင်ကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကို မပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်ပါဘူး” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous ????????????????? ???????????????? ???????????????????????????
Next Justin Bieber ?? Tom Cruise ??? ???????????????????? ???????????????? ? ? ?